को हुन् सन्नी लियोनी भन्दा हट बलिउड अभिनेत्री ! भिडियोमा हेर्नुस् « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
को हुन् सन्नी लियोनी भन्दा हट बलिउड अभिनेत्री ! भिडियोमा हेर्नुस्
बलिउडमा जब ‘जिस्म २’ फिल्मबाट पोर्नस्टार सनी लियोनीको आगमन भयो उनले दिएका हट , बोल्ड अनि सेक्सको दृश्यहरुले हंगामा मच्चिएको थियो । उनको हरेक फिल्महरुमा यस्ता दृश्यहरु हाबी हुन थालेपछि उनको चौतर्फी बिरोध भयो भने देशै निकाला गर्नु पर्ने अवाजसमेत उठे । यद्धपी अहिले पनि उनलाई नायिकाको रुपमा खुलेर स्वीकार गरिहालेको अवस्था छैन ।
यसैबीच निर्माता निर्देशक रामगोपाल बर्माले अर्की पोर्न स्टार मिया मालकोवालाई आफनो फिल्ममाफर्त भित्राउदैछन् । ‘गड, सेक्स एण्ड ट्रुथ’ फिल्मको पोस्टारमा फिल्मकी नायिका सर्वस्व नाङगै थिईन जुन पोस्टरले हंगामा मच्चाईरहेको बेला फिल्मको ट्रेलरले धेरैको होसहवास उडाईदिएको छ । ट्रेलर मा मिया सनी लियोनीलाई पनि मात दिएकीछिन् ।
ट्रेलरको हरेक हिस्सामा उनी नाङगो छिन् त्यो पनि स्र्वस्व । ट्रेलरमा उनले सेक्सको बारेमा बोल्दै महिलाको शरिर पुरुषहरुको सम्पत्ती नभएको बताएकीछिन् । निर्देशक राम गोपाल बर्माले मानिसहरुलाई सेक्स जरुरी भए पनि यसैको कारण महिलाहरुले दुख पाउनु हुन्न भन्ने संन्देश दिन खोजिएको बताएका छन् ।
उक्त भिडियोलाई १२ लाख भन्दा बढिले हेरिसकेका छन् । फिल्म जनवरी २६ मा रिलिज हुदैछ । यो फिल्मको रिलिजसंगै कति बिवादमा आउने हो हेर्न बाँकी छ । सनी लियोनीको खुबै बिरोध गरेका भारतीय दर्शकहरुले मियालाई भने कुन रुपमा लेलान् त्यो भबिष्यमा नै देखिएला ।